Geosocial na Ọnọdụ Dabere na Onye Nkuchi | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 11, 2011 Fraịdee, Nọvemba 11, 2011 Douglas Karr
E gosipụtara ụfọdụ ọmarịcha stats dị ịtụnanya banyere nnabata nke Geosocial na Ọnọdụ Dabere na Ọrụ (LBS) site na ngwaọrụ mkpanaka ka ekpughere na inforgraphic a Flowtown - Ngwa Azụmaahịa Mgbasa Ọha. N'elu 58% nke ndị ọrụ smartphone na-eji ọrụ ndị a. Ihe omuma ihe na-akowa oru obula dika:
Nhazi Intanet - typedị ịkparịta ụka n'socialntanet a na-eji ọrụ na ike mpaghara, dịka ịba ụba na geotagging, iji mee ka mmekọrịta ndị ọzọ nwee mmekọrịta.
Ọrụ Ndị Dabere na Ọnọdụ - typedị ozi a ma ọ bụ ọrụ ntụrụndụ na-eji ọnọdụ ọnọdụ nke ekwentị mkpanaaka site na netwọkụ.
Tags: geosocialLbsọrụ dabere na ọnọdụdabere na ọnọdụMobile na Mbadamba ụrọekwentị mkpanakasmartphone